AWS 5.20 E71T-GS bụ ọnọdụ niile, waya mkpuchi onwe ya nke echekwara maka otu fillet na ntanye okirikiri na galvanized ma ọ bụ carbon carbon dị ka mkpa dị ka nlele 20, na-enweghị ọkụ-site. Gasless Waya E71T-GS ọtụtụ ndị na-eji na obere obere 110 volt ịgbado ọkụ igwe, àjà ezigbo aak edinam na obere spatter. Njem ọsọ bụ ngwa ngwa, penetration dị mma na slag mwepụ dị mfe.
IHE: Dịka ọ bụla na wired ndị ejiri aka ha kpuchie onwe ha, E71T-GS nwere ogige fluoride, nke chọrọ nlebara anya na ikuku mgbe ejiri ya na ígwè welded. Ekwesighi ịmịnye oxide nke zinc guzobere n'oge ịgbado ọkụ ka ọ nwere ike ibute ahụ ọkụ ọkụ. Mgbe ị na-agbanye ọkụ n'ime ụlọ ma ọ bụ na mpaghara mechiri emechi, jide n'aka na ventilashị zuru oke.
Nchebe onwe onye, ​​waya niile na-agbanwe agbanwe maka ngwa gafere otu. Magburu onwe ya iji na mkpa gauges nke galvanized & nwayọọ ígwè. Njem ọsọ dị elu & weld n'akụkụ dị ire ụtọ. Ọ nwere ezigbo arc edinam, zuru slag mkpuchi, mfe slag mwepụ & ala spatter. Achọghị gas na-echebe ya. Ojiji nke ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ DC na-ebelata ihe ize ndụ nke ire ọkụ. Nhazi arụmọrụ dị elu karịa nke electrodes arc echebekwa.
Ọta Gas: Gasless
Chemical mejupụtara nke metal edebe (%)
Ihe Mn Na P S A1 Ni Mo Kr C V
Ọkọlọtọ 1.75 ≤0.60 .0.03 .0.03 .1.80 .0.50 / / / /
Njirimara oru nke igwe echekwara
Ihe Ekwe Point (MPa) Ike ọdụdọ (MPa) Mgbatị (%) Charpy V-notch Mmetụta Ike
Nwale Ule.(Celsius C) Ike Ike(J) Nkezi(J)
Ọkọlọtọ ≥400 ≥480 20 / / /
5.Size na-atụ aro Ugbu a (DC-) na voltaji iche
Nha Ogologo Volta Ugbu a (DC-) Waya ndepụta ọsọ
E nwere dayameta:
Dia. (mm): 0.8 0.9 Ogbe 1.2
(anụ ọhịa) 0.030 ” 0.035 ” 0 .040 ” 0.045 ”
1kg / 5kgs kwa spool;
nkenke winding, okpomọkụ shrinkable film na mgbe ahụ juru n'ọnụ na katọn.
Nke gara aga: Nwayọọ Steel ịgbado ọkụ Electrode AWS E6010
Osote: Nwayọọ Steel ịgbado ọkụ Electrode AWS E6011